Olee otú iji tọghata na Ọkụ AVCHD ka DVD on Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata AVCHD ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
"M ka nwere ọtụtụ obere ezinụlọ videos na m Sony HDR-SR1 ike mbanye ha niile na-na AVCHD usoro. Ugbu a, m chọrọ ka ọkụ ndị a AVCHD vidiyo na DVD nkwado ndabere na mpaghara ndị a dị oké ọnụ ahịa ezinụlọ videos. Olee otú m nwere ọkụ AVCHD ka DVD nke mere na ha nwere ike igwu na ihe ọ bụla ọkọlọtọ ọkpụkpọ DVD? "
Ọtụtụ ndị na-enwe mgbagwoju anya banyere otú tọghata AVCHD ka DVD. N'ezie, ihe niile ị chọrọ bụ a siri ike ma dị mfe iji DVD burner iji tọghata AVCHD faịlụ ka DVD usoro maka playback na ihe ọ bụla ọkọlọtọ DVD ọkpụkpọ. Iji mee nke a Job, anyị na Wondershare naturually nwere ike ikwu DVD Creator (Windows 8 na-akwado) na DVD Creator for Mac (Mountain odum akwado). Na nke a DVD onye, ​​ị nwere ike mfe ọkụ niile ewu videos, slideshows, na foto DVD na magburu onwe ya mma. Ihe bụ ihe ọzọ, na imbedded edezi ọrụ ma na free menu ndebiri nwere ike inyere aka gị video DVD ozugbo. Download nri version dị ka gị sistemụ na-eje ije site na n'okpuru akowaputara ndu.
Download AVCHD ka DVD Ntụgharị isure ọkọlọtọ DVD diski.
Cheta na: N'okpuru ebe ndu-ewe Windows screenshots. Bụrụ na ị chọrọ converting AVCHD ka DVD na Mac, biko rụtụ aka na Mac ọrụ 'ndu.
1 Nyefee AVCHD videos na kọmputa
AVCHD videos nwere ike e dere ọtụtụ dị iche iche media, gụnyere ike mbanye, flash mbanye, DVD, wdg N'okpuru ebe bụ n'ozuzu ụzọ nyefee AVCHD video faịlụ ka kọmputa.
Ike mbanye camcorder: Dị nnọọ arụ ọrụ dị ka ike mbanye na kọmputa gị. Na-emekarị na-eji eriri USB / FireWire / HDMI nyefee AVCHD vidiyo na kọmputa ike mbanye.
Flash Drive camcorder:-eji eriri USB maka wuru na-Flash ebe nchekwa camcorder mgbe kaadị agụ maka mpụga SD kaadị ma ọ bụ MemoryStick kaadị.
DVD camcorder: Ụfọdụ AVCHD camcorder nwere ike ire video ka DVD, nke nwere ike na-egwuri na n'ụlọ DVD ọkpụkpọ. Ị mkpa a Video Ntụgharị nyefee ndị na-edekọ video na kọmputa.
2 Import AVCHD obere vidiyo
AVCHD videos-emekarị nwere filename externsion nke M2TS, M2T, ma ọ bụ MTS. Pịa 'Import' ịgbakwunye AVCHD vidiyo na kọmputa ma ọ bụ dọrọ videos ka usoro ihe omume si File Explorer. Mgbe zuru ezu, ịhụchalụ videos na nri ị na-elele window. Na nri isi iyi window, ị bụ free ịhazi videos iji na ịtọ titlesets. Photo importing a na-akwado na-eme ka a ngosi mmịfe nkiri na camcorder photos isure ka DVD.
3 Dezie AVCHD videos ma hazie DVD menus (nhọrọ)
Wondershare DVD Creator (Windows 8 na-akwado)-enyere gị aka ubi na ewepụtụ videos-elekwasị anya na a ụfọdụ akụkụ, bugharia videos na ịgbanwe video mmetụta iji nweta a mma visual mmetụta, tinye watermarks mee ihe atụ nke Mpaghara, wdg
DVD menu bụ ịnara maka DVD. Otú ọ dị, a DVD menu ga-eme ka gị video ọdịnaya mma haziri. Nke a AVCHD burner enye 50+ njikere na-eji ndebiri, dị nnọọ bulie ọkacha mmasị gị na n'ihu hazie ya. N'ihi na a ahaziri DVD menu, ị nwere ike ịgbanwe menu buttons, thumbnails, tinye ndabere music, omenala ndabere image, wdg
4 Malite AVCHD ọkụ
Ugbu a, i nwere ike ịhụchalụ gị dum DVD nkiri oru ngo iji hụ ihe niile bụ ihe zuru okè. Ọ bụrụ otú ahụ, fanye a ide DVD diski n'ime DVD mbanye, na ịgbanwee gaa na "Ọkụ" taabụ. Ị pụrụ ime ka ọtụtụ ntọala e tupu ịmalite dee AVCHD faịlụ ka DVD. Họrọ mmepụta format si "Ọkụ ka" ndepụta na kụrụ "Malite" button.
Mere. Na dị nnọọ ole na ole clicks, ị nwere ike ịmepụta DVD si AVCHD faịlụ na ọmarịcha DVD menus na anya-akụta video mmetụta. Dị nnọọ-enwe AVCHD videos na fim na gị na nnukwu TV ihuenyo!
Na-ekiri ndị nzọụkwụ-site-nzọụkwụ video nkuzi n'okpuru:
Ihe banyere AVCHD
AVCHD (Advanced Video nzuzo High Definition) bụ a usoro maka na ndekọ na playback nke elu definition video. High Definition camcorder (na-aha ya bụ AVCHD camcorder na 720p ma ọ bụ 1080p) na-aghọ ndị ọzọ na ndị ọzọ na-ewu ewu ebe ọ na-enye ọrụ a mma visual ụtọ. Dị ka creators nke AVCHD, Panasonic na Sony na-achọsi na-akwado AVCHD faịlụ playback ha Blu-ray egwuregwu. The AVCHD faịlụ ndọtị nwere ike ịbụ .mts, .m2ts, .tp, .mod, .trp, wdg AVCHD ndia video na a nso nke mkpebi gụnyere 1080p, 1080i na 720p. Mgbe ọkụ AVCHD ka DVD, họrọ "High Quality" ke ọkụ parameters iji hụ na video mma.
Free download AVCHD DVD onye:
Olee otú m Record Ma ọ bụ Ọkụ TV Kụziiri jidesie A DVD?
Panasonic DVD burner: Olee Ọkụ Panasonic Video ka DVD
Gịnị bụ 3D Blu-ray? Ebe Blu-ray 3D Movies?
Olee otú iji tọghata na Ọkụ FLV ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)